FANAFIHANA MITAM-BASY : Mihantsy ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana ny jiolahy
”Antsoy ny Emmo nareo fa izahay tsy matahotra…”, “Nareo ato miseho mafy be, antsoy ny emmo fa izay mihitsy no tadiavinay…”. 5 décembre 2017
Ireo hatrany no nolazain’ireo jiolahy nanafika ny alin’ny sabotsy hifoha alahady teo. Tao Tsararano ambony sy Tsararano ambany no nisehoan’ny fanafihana. Tamin’ny roa ora latsaka teo no nisy namaky ny ‘Epicerie Stephanie, taitra ny tompon-trano ka nanenjika ireo olon-dratsy. Nanao tampody fohy anefa izy ireo avy eo no sady nitoraka vato ny tompon-trano. Avy eo dia namoaka basy ary nitifitra in-telo. Nanavotra aina ary nisitrika an-trano ireo olona nanenjika.
Nanaram-po amin’izay ireo jiolahy namaky ny trano ka ny varavarana vy sy ny rindrina mihitsy no nopotehiny hidirana tao amin’ny trano fivarotana. Miisa telo izy ireo, ka azony tamin’izany ny vola mitentina Ar400 000 ary mbola nentin’ireo koa ny sigara amina ‘cartouche’ isankarazany miisa 20. Mbola gony tao amin’io trano fivarotana io no nalainy nitondrana izany, ka nariany ny vary tao anatiny. Araky ny nambaran’ny olona iray dia nahita ireo jiolahy nihaodihaody ny fokonolona ary nanatona azy ireo hanontany ny ataony teo. Fandrahonana avy hatrany no azon’izy ireo rehefa nanaraka ireo jiolahy, ary nifampitoraka vato…
Rehefa namoaka basy sy nitifitra in-telo ireo jiolahy dia samy nanavotra aina daholo ny fokonolona tonga teo. Niantso ny emmo securité ihany ny lasibatra saingy efa nadio ny rano nitan’ireo jiolahy… Tsy ampy adiny iray taorian’izay dia fianakaviana roa hafa indray no lasibatra. Araky ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray dia niditra tao an-tranon’izy ireo, ireo jiolahy fa tsy nisy naheno izy ireo. Lasan’izy ireo ny finday sy ny vola, dia nivoaka izy ary niditra tamin’ny tokatrano iray hafa ka lasan’izy ireo ny solosaina. Mbola tao anatin’ilay tokotany izy no nisy nahatsikaritra ka nanontany azy hoe iza izy. Tsy taitra mihitsy anefa ilay jiolahy no tsy nihetsika.
Naheno izany ny tompon’ny trano nidirany voalohany dia nivoaka, saingy notohanan’ilay jiolahy vato sy hazo ny trano ka mila natosika mafy vao tafasokatra. Vao tafasokatra ilay trano dia nanao tari-dositra ny jiolahy saingy tsy nandeha lavitra fa tao ambadiky ny toeram-pisotroana izay an’ireo olona ireo ihany. Araky ny nambaran’ilay ramatoa dia miisa telo koa izy ireo.
Nanaraka azy ireo ilay tompon-trano sy ny rahalahiny roa saingy norahonan’ireo jiolahy ary nitifitra in-telo ihany koa izy ireo. Niverina nanavotra aina avy hatrany moa ireo nanaraka ary niantso ny emmo. Nandritra izany dia novakian’ireo jiolahy ny bar, ary nalainy ny vola madinika hitany tao no mbola nosotroiny ihany koa ny toaka tao. Efa lasa hatrany izy ireo vao tonga ny mpitandro filaminana ary manambara mazava ireo jiolahy fa tsy matahotra ireo mpitandro filaminana.
Tsy vao izao no nisy fanafihana toy izao, hoy kosa ny tompon’andraikitra ao amin’ny fokontany fa efa nisy tao amin’ny garan-tsarety roa herinandro izay ka nahatonga ny fokontany nanao ‘couvre-feu’. Tsy raharahian’ireo jiolahy anefa izany ary vaky lefa hatrany ny mpanao andrimasom-pokonolona rehefa mahita ny basin’izy ireo. Araky ny fandinihan’ireo tonga teny dia mety andian-jiolahy iray ihany ireo nanao ny fanafihana roa ireo. Ny mahatalanjona ireo vahoaka dia tsy misy miraharaha mihitsy na efa miantso mpitandro filaminana aza ny olona tafihany… Mbola misy fotoana hisotroany toaka…
Nefa na izany aza dia mbola tsy mahatratra azy ireo ireto mpitandro filaminana ary tsy mahita ny alehany akory fa mbola ny tsara sitrapo no andrasana hanome vaovao, ahafahana misambotra ireo olon-dratsy, hany ka raha tsy misy ny mpanome vaovao dia matetika tsy hita sy tsy tratra mihitsy ireo jiolahy. Fanamby ho an’ny mpitandro filaminana sy ny tompon’andraiki-panjakana ny fisamborana ireo jiolahy ireo sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra satria dia ihomehezan’ireo jiolahy ireo fotsiny izy ireo ka anaovany fangalapiery.
Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (232) 15 octobre 2018 Niloa-bava sy nitondra valin-kafatra manoloana ny fitakian’ireo kandidà 22 FILOHAN’NY HCC (217) 17 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (185) 15 octobre 2018 Efa betsaka ireo lasibatra eto Antsiranana FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY (155) 18 octobre 2018 Zazavavy 12 taona maty voaolana KAOMININA AMBANIVOHITR’I BETSIAKA AMBILOBE (145) 19 octobre 2018 Nirentirenty volomboasary ny tanànan’Antananarivo FANOHANANA AN’ I ANDRY RAJOELINA (107) 15 octobre 2018